Wararkii ugu dambeeye ee dagaalka gobolka Tigreey ee dalka Itoobiya | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Wararkii ugu dambeeye ee dagaalka gobolka Tigreey ee dalka Itoobiya
Wararkii ugu dambeeye ee dagaalka gobolka Tigreey ee dalka Itoobiya
Boqollaal Qof Ayaa ku Dhintay Kumannan Kalana Guriyahoodii Ayay Ka Qaxeen, dagaalkaan xargaha goystey ee ka socda dalkan dhaca Afrikada Bari una dhaxeeya dowladda dhexe ee Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigreey gaar ahaan ururka xoreynta dadka Tigreey-ga ee loo soo gaabiyo TPLF.
Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay dagaalka Tigraay inuu galay wajigiisi seddexaad ee uu dambeeyey, ciidamadiisuna ay wadaan dagaal ballaaran oo ay ku qabsanayaan caasimadda deegaanka Tigraay ee Maqale.
Wuxunna Abiy sheegay ciidamadiisu inuu ku amray dagaalka iney u galaan si taxaddar leh ayna qaadaan wax kasta oo ay ku yareyn karaan qasaaraha dagaalkaasi kasoo gaari kara shacabka magaalada Maqale ku nool.
Hadalkan Abiy ayaa ku soo beegmaya kaddib marki uu dhammaaday seddexdi maalmood ee ay dowladda u qabatay xoogagga TPLF iney si nabad ah dowladda isugu soo dhiibaan.
TPLF oo gacanta ku haya magaalada Maqale waxay sheegeen iney dagaalka sii wadayaan oo ay marnaba ciidamada Abiy iisu dhiibeyn.
Madaxa xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay Michele Bachelet waxay sheegtay dadka magaalada ku nool iney soo wajahday “khatar aad u weyn“.
“Runtii waa mid laga argagaxo xaaladda halista ah ee ay ku jiraan shacabka Tigraay gaar ahaan, dadka rayidka ah ee ku xayiran magaalada Meqale,” ayey tiri, waxayna intaa ku dartay.
“Suurtagalnimada iney dhacaan xadgudubyo halis ah oo ka horimanayo sharciyada xuquuqda aadanaha ee caalamiga“.
Boqollaal qof ayaa lagu soo warramayaa iney dagaalka afarta toddobaad ka socday deegaanka Tigraay boqollaal qof ay ku dhinteen kumannan kalana ay ka qaxeen guriyahooda, xilli ay ciidamada Itoobiya gabsadeen magaalooyin badan oo ku yaalla deegaanka Tigray oo TPLF maamulayeen.
Xaqiijinta sheegashada dhinacyada dagaallamaya ayaa aad u adag, maadaamaa ay xaddidan yihiin wararka la heli karo, maadaamaa ay telefoonnada iyo internet-kana ay go’an yihiin.
Daniel Birhane oo ah wariye isla-markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda oo ku sugan magaalada Maqale wuxuu sheegay in gudaha magaalada aanan laga dareemeyn saansaan colaadeed sidoodina ay ‘u cammiran yihiin’ maqaayadaha, baararka, hoteellada iyo goobaha laga dukaameysto.
Seddex ergo oo ka socota Midowga Afrika oo loo xilsaaray inay ka shaqeeyeen sidii loo joojin lahaa colaadda Tigrayayaa gaaray caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa.
Saddexdan mas’uul ayaa kale ah: Madaxweynihii hore ee Mozambique, Joaquim Chissano, Ellen Johnson Sirleaf oo hogaamin jirtay Liberia iyo Kgalema Motlanthe oo muddo kooban madaxweyne ka ahaa Koonfur Afrika.
Balse ergada seddexda ah looma oggolaan iney safar ku tagaan deegaanka Tigraay.